Amadivayisi Abhekene Namakhasimende nokuthi Ungathengisa Kanjani Nawo | Martech Zone
UMsombuluko, May 4, 2015 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Ekumaketheni kwezinsuku zanamuhla, umsebenzi we-CMO uya ngokuya unselela ngokwengeziwe. Ubuchwepheshe buguqula indlela yokuziphatha kwabathengi. Ezinkampanini, sekube nzima ukuhlinzeka ngemizwa yomkhiqizo engaguquki ezindaweni zokuthengisa nasezakhiweni zazo zedijithali. Okuhlangenwe nakho kwamakhasimende phakathi kobukhona bomkhiqizo ku-inthanethi nangokwenyama kuyahlukahluka kakhulu. Ikusasa lokudayisa lilele ekuvaleni lokhu kwehlukana kwedijithali nangokomzimba. Amadivayisi Abhekene Namakhasimende enza ukuhlangana kwedijithali okufanelekile nokuqukethwe ukukhulisa umuzwa wamakhasimende ezindaweni ezibonakalayo.
A Idivayisi Ebhekene Nekhasimende kuyidivayisi ikhasimende elizosebenzisana nayo noma elizizwe ngayo ngqo. Izibonelo Zamadivayisi Abhekene Namakhasimende afaka phakathi ama-Digital Kiosks, i-Mobile Point of Sale (mPOS), ama-Ruggedized Devices, i-Digital Signage noma i-Headless Devices. Wonke lawa madivayisi enzelwe ukubandakanya nokwazisa amakhasimende ngaphakathi kwezindawo ezibonakalayo.
Amadivayisi Abhekene Nekhasimende Awela Ezigabeni Ezintathu
Amadivayisi weDijithali - Amadivayisi aletha ukuhlangana kwedijithali nokuvela. Izibonelo zifaka phakathi i-Digital Signage, Amathebulethi nama-Digital Kiosks.
Okwenziwayo - Amadivayisi Abalekisa Ukuthengiselana Kwekhasimende. Izibonelo zifaka i-Mobile Point-of-Sale (mPOS) namadivayisi wokugcwalisa i-oda.
Okuhlangenwe nakho - Amadivayisi Aphakamisa Okuhlangenwe Nakho Kwekhasimende. Izibonelo zifaka i-Internet of Things (IoT) Sensor Hubs, IoT Headless Devices).
Amabhizinisi asebenzisa Amadivayisi Abhekene Nekhasimende njengama-kioski okuzenzela wona amakhasimende abo. Lezi zinsiza zenza imisebenzi ehlukahlukene yokuthenga kusuka kokuhlangenwe nakho okungapheli kwephaseji nokwenza ngokwezifiso umkhiqizo ekuthengiseni ukungena nokuzi-oda ukudla ezindaweni zokudlela nasemahhotela. Amabhizinisi asebenzisa izimpawu eziyingqayizivele zedijithali kumakhulu ezindawo ukudala umuzwa womkhiqizo ongaguquguquki. Izimpawu zedijithali zisetshenziswe yimikhiqizo yokuthengisa okubukwayo kwedijithali, izimpawu zezinto ezisezitolo zokudla, izimpawu zokuthola indlela, izimpawu zomcimbi nokunye okuningi. Izimpawu zedijithali yisisombululo esisebenza kahle futhi esinamandla kakhulu kunezimpawu eziphrintiwe, ezivumela amabhizinisi ukuthi asebenzise ividiyo ekubonisweni komkhiqizo esikhundleni sezithombe ezimile.
Amabhizinisi abeka amadivayisi abhekene namakhasimende ezandleni zabasebenzi ukuze athuthukise indlela yokuthenga esitolo. Lawa madivayisi wokuthengiselana, njenge-mPOS namadivayisi wokugcwalisa ama-oda ezindaweni zokudlela, avumela abasebenzi ukuthi bathuthukise ukulethwa kwamakhasimende ngezinqubo ezisebenza kahle nangokwanda kobuhlakani ngemikhiqizo nemisebenzi yamakhasimende.
Imikhiqizo isiqalile ukusebenzisa Amadivayisi Abhekene Namakhasimende ukulawula isipiliyoni sezinzwa zamakhasimende abo. Imikhiqizo iyakwazi ukulandela ukuhamba kwamakhasimende nethrafikhi enezindawo zokuzwa. Ngokusebenzisa amadivayisi angenakhanda, isitolo singashintsha ukukhanya, amafomethi amakhulu wokubuka, nomculo ngamandla. Ngala ma-elementi wezinzwa asezandleni zawo, ama-brand angakha umuzwa ongaguquguquki wamakhasimende ezindaweni eziningi zokuthengisa ezingokomzimba. Lawa madivayisi awadingi isikrini, kepha njengawo wonke amadivayisi abhekene namakhasimende, angaphathwa kude.
Amadivayisi Abhekene Nekhasimende aletha ukusebenzisana kwedijithali okufanelekile nokuqukethwe okubandakanya amakhasimende. Ngokuletha, ukukala nokwandisa ukusebenzisana kwedijithali, ungaqhubeka uthuthukise imizamo yakho yokumaketha ngaphakathi kokuthengisa okwengeziwe nokweneliseka kwamakhasimende. Amathebulethi ajwayelekile, aseshalofini angaguqulwa abe ngamadivayisi we-Customer Facing and Amadivayisi angenakhanda angathengwa ngaphansi kwe- $ 200. Amadivayisi Abhekene Nekhasimende ahlinzeka ngesixazululo esinamandla nesonga izindleko sezidingo zakho zokumaketha zesiteshi se-omni.
Ukusiza ama-CMO ukuthi aqonde ukubaluleka kwamadivayisi abhekene namakhasimende nokuthi angawasebenzisa kanjani kumasu abo wokumaketha, uMoki udale “Umhlahlandlela we-CMO Kumadivayisi Abhekene Namakhasimende.”
Tags: amadivayisi abhekene namakhasimendeizidleke zedijithaliizimpawu zedijithaliIotamadivayisi angenakhandaizikhungo zezinzwa ze-iotizikhalaindawo ephathekayo yokuthengisapos mobilemPOSukugcwaliseka kwe-odaamatafula
Kuyini Ukuhlaziywa Kweqembu leGoogle Analytics? Umhlahlandlela wakho oningiliziwe